सरकार ! दसैंमा भोका जनता हेर्ने कि ?
हिन्दुहरूको महान् चाड बडादसैं सुरु भएसँगै अधिकांश नेपालीमा हर्ष र उल्लास छाएको छ। पढाइ र रोजगारीका लागि सहर छिरेका उनीहरू गाउँ फर्किरहेका छन्। पारिवारिक भेटघाटमा जुटेका छन्। किनकि यो पर्व नै जमघटको हो। वर्ष दिनदेखि टाढा भएका दाजुृभाइ, दिदीबहिनी तथा आफन्तहरू भेटघाट गरेर सुखदुःख साट्दै मिठोमसिनो खाएर मनाउने पर्व हो।
तर, विडम्बना यस्तो समयमा पनि कतिपय नेपाली बाध्यताले विदेश पलायन भइरहेका छन्। आँखाभरि आँसु लिँदै खाडीमा बालुवा पेल्न हिँडिरहेका उनीहरू परिवार धान्नकै लागि दसैंको मुखमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। के उनीहरूलाई दसैं मान्न मन थिएन होला ? दसैंमा परिवारसँग खुसी साट्न मन थिएन होला ? बाबुआमासँग टीका थाप्न मन थिएन होला ? साथीभाइसँग रमाइलो गर्न मन थिएन होला ? अवश्य थियो तर उनीहरू आर्थिक मजबुरीसँग हार खान पुगे। आज नबिदेसिए त्यो बच्चा कसले पालिदिने ? आज नगए अर्को दसैंसम्म कसरी बाँच्ने ? आज नगए परिवारको वर्षभरि पेट कसरी पाल्ने ? हो यो उनीहरूको बाध्यता हो। परिवारप्रतिको मोह र जिम्मेवारी पनि हो।
दसैंको मुखमा काखमा नानी च्यापेर भारततर्फ जाँदै गरेकी ती महिलाको अवस्था देखेर हरेक नेपालीलाई भक्कानिन मन लाग्यो। तर, लागेन त केवल यो सरकारलाई। त्यस्तो हृदयविदारक तस्बिर देखेर पनि सरकारको मन भने पग्लिएन। गठबन्धनको मन पग्लिएन। हे सरकार ! के तिमी यति निर्दयी छौं ? आफ्ना नागरिकप्रति यति गैरजिम्मेवार छौं ? जिम्मेवारी बोध हुन्छ भने उनीहरूलाई किन रोक्न सकेनौं। एक पटक सोचौं त। विदेश जाने रहर कसैलाई हुँदैन ? यो उनीहरूको बाध्यता हो। यदि यो कुरा सरकारले बुझेर देशमा उनीहरूका लागि बाँच्ने आधार बनाइदिने हो भने आज कोही पनि खाडीमा गिटी कुट्न जानु पर्दैन। पसिना बगाउन जानु गर्दैन ...